TemplateShock, in ka badan 600 oo habeyn ah oo tifaftiran oo bilaash ah oo loogu talagalay xirfadleyda iyo shirkadaha | Abuurista khadka tooska ah
TemplateShock, in kabadan 600 oo habeyn wax laga bedeli karo oo bilaash ah oo loogu talagalay xirfadleyda iyo shirkadaha
Ciise Arjona Montalvo | | Design Graphic, muujiye, Photoshop
TemplateShock, waa degel ka kooban in ka badan 600 qaabab naqshadeyn bilaash ah dhammaan noocyadu, ha ahaadeen shirkadaha, xirfadleyda iyo taageerayaasha naqshadeynta garaafka. Boggan wuxuu keenayaa arrimo si buuxda wax looga beddeli karo, iyo ururintani waxay keenaysaa kuwan soo socda: Moodellada loogu talagalay Dib u bilaabid, Mawduucyo loogu talagalay Noocyo kala duwan, Mawduucyo loogu talagalay Biilasha, Kaararka Visita, Mawduucyo loogu talagalay logos, Mawduucyo loogu talagalay Waraaqaha, Mawduucyo loogu talagalay Sawirdarbi, Mawduucyo loogu talagalay Liisaska, iyo qaar kaloo badan.
1 Dib u cusbooneysii Mawduucyada
2 Templates Trifold
3 Qaaciidooyinka Qaansheegta
4 Kaararka ganacsiga
5 Astaamaha Astaanta
6 Moodooyinka Waraaqda
7 Moodooyinka Flyer
8 Templates Menu
9 Mawduucyada Faylka
10 Mawduucyada Poster
11 Kaararka ganacsiga
12 Tusaalooyinka Hindisaha
Dib u cusbooneysii Mawduucyada
Xidhmadan weyn ayaa ka kooban in kabadan 30 CV-ga Diyaar u ah in la soo dejiyo, dhammaantood waxaa ku jira xarfaha qaababka ugu caansan. Waxay yihiin hab fiican oo lagu soo bandhigo xirfadahaaga, aqoontaada iyo waayo-aragnimadaada. Ku dar faylasha ilaha si aad si fudud ugu beddeli karto gudaha Photoshop, Sawirqaade ama InDesign.
Kuwaas tusaalooyin buug-yaraha Waxay ku siinayaan nashqado aad u tiro badan oo soo bandhigi doona macluumaad deg deg ah oo ku saabsan meheraddaada, dhacdadaada, mashruucaaga ama si fudud u gudbinaysa farriin kasta oo aad muhiim u aragto. Maaddaama dukumiintiyadan la laaban karo, meel bannaan, oo aan waqti lahayn, waxaad akhristayaasha siin kartaa fikrad wanaagsan oo ah waxa aad isku dayeyso inaad la xiriirto. Ka dooro wax ka badan 30 naqshadood oo kala duwan, dhammaantood wax laga beddeli karo Photoshop, Sawirqaade iyo InDesign.
Xitaa ka dib markaad dhameyso u shaqeynta macaamiishaada, waxaa muhiim ah inaad ilaaliso muuqaal wanaagsan illaa daqiiqada ugu dambeysa si loo hubiyo inay soo noqdeen, iyo xitaa kula talin kuwa kale inay kula shaqeeyaan. Marka wuu ka tagayaa iyaga a qaansheegta soo jiidasho leh sifiican ugu eeg macmiilka. Dhammaan wax laga beddeli karo Photoshop, Sawirqaade iyo InDesign.
ka kaararka ganacsiga waxay noqon kartaa hab fiican oo macaamiisha suurtagalka ah loogu soo bandhigo shirkaddaada, oo aad saameyn togan ugu yeelato, waana sababta ay u sameeyeen xirmadan weyn in ka badan 100 shey kaararka ganacsiga, diyaarna u ah in la isticmaalo oo la jaanqaado sidaad u jeceshahay, dhammaantood waxaa si buuxda loogu habeyn karaa 3 qaab oo kala duwan: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator iyo InDesign.
El logo Ganacsigu waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee lagu muujiyo sawirkaaga, kaasoo si toos ah uga dhex muuqda lamaanayaashaada ama macaamiishaada mustaqbalka. Si aad wax uga sii dhigto xitaa riwaayado, waxay u badan tahay inay tahay waxa ugu horreeya ee dadku arkaan markay soo galayaan webka, waana lama huraan in bilowga la soo bandhigo saameyn xoog leh. Hagaag ha walwalin inaad tahay qaabab astaan ​​bilaash ah kaa caawin doona inaad taas ku guuleysato. Isku soo uruurintaan in ka badan 100 sheybaar logo waxay u yimaadaan si buuxda wax loo saxo (PSD), InDesign (INDD) iyo Sawire (AI), dhammaantood waa bilaash inaad soo dejiso oo diyaar u tahay inaad daabacdo.
Kuwaas warqadaha qoraalka bilaash ah, waxay kuu oggolaaneysaa inaad si habboon ula xiriirto nooc kasta oo xaalad ah. Haddii aad u baahan tahay inaad u dirto macluumaad ganacsi oo muhiim ah mid ka mid ah saaxiibbadaada, ama mid ka mid ah xubnaha qoyskaaga oo u baahan fariin saaxiibtinimo, fudud, waxaad ku kalsoonaan kartaa mid ka mid ah tusaalooyinkaas si aad u muujiso farriimahaaga. Sida caadiga ah ee TemplateShock, waxay la yimaadaan kooda faylasha koodhka ilaha laga soo xigtay markaa waad sameyn kartaa isbadalladaas ugu dambeeya kahor dhalmada
Waraaqaha ayaa ah hab fiican oo lagu abaabulo macluumaad kooban. Waxay noqon karaan ilo waxtar leh oo loogu talagalay dhiirrigelinta dhacdooyinkaaga, alaabadaada, iwm. Taasi waa sababta ururintani ay uga badan tahay 30 sheybaar oo diyaar u ah soo dejinDhammaantood waxay ku yimaadaan feylasha PSD, AI iyo InDesign oo si buuxda wax looga beddeli karo si aad wax uga beddesho sida aad jeceshahay, noocyada xarfaha ayaa lakulmay oo loogu magac daray habka saxda ah.
Samee waayo-aragnimo macaamil macaan isla bilowga mid ka mid ah kuwan tusaalooyin menu bilaash ah. Waxay ka mid yihiin ballaaran midabyo kala duwan, naqshado iyo astaamo Waxay hubiyaan inay soo jiitaan dareenka kuwa u imanaya inay wax cunaan. Dabcan, dhammaantood waxay ku jiraan feylasha ilaha sidaa darteed waxaad ku dari kartaa taabashada dhammaystirka muuqaalkaaga si aad ugu habboonaato meheraddaada, oo qor dhammaan cuntooyinkaaga, cabbitaannada, iyo macmacaanka.
Ku ilaali qaybaha macluumaadkaaga daabacan faylalka, kuna dabakho muuqaalka u gaarka ah ee ku habboon mashruucaaga ama shirkaddaada mid ka mid ah tusaalooyinka galka bilaashka ah. Ku habboon buug-yaraha, shirkadaha iyo waxyaabo kale oo badan. Shay kasta waxaa lagu siiyaa faylalka ay ka soo kala jeedaan si aad wax uga beddeli karto oo aad u hubiso in faylku ay matalaan ujeeddooyinkaaga iyo qaabka aad sida dhabta ah u rabto.
Calaamad si fiican loo dhigay waddo mashquul badan ama dhisme ayaa soo jiidan kara boqolaal qof. Kuwani tusaalooyin bilaash ah waxay noqon karaan saaxiibbadaada ugu fiican marka la sameynayo sawirka meheraddaada xigta ama dhacdo. Ku dar faylasha asalka ah si ay kaaga caawiyaan inaad u qaabeyso sida aad jeceshahay. Waad wax ka beddeli kartaa tusaalooyinkan, midabbada kala duwan, qaababka iyo qaababka, maadaama ay ku yimaadaan qaabab PSD, AI iyo InDesign.
ka kaararka ganacsiga waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu soo bandhigo macaamiisha mustaqbalka ee shirkaddaada oo aad saameyn togan ugu yeelato iyaga, taas oo ah sababta aan u haysanno xirmadan weyn oo leh wax ka badan 100 tusaalooyin kaar ganacsi ah, diyaar u ah in la isticmaalo lana jaanqaado waxa aad jeceshahay, dhammaan qaab-dhismeedyadu si buuxda ayaa wax looga beddeli karaa 3 qaabab kala duwan: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator iyo InDesign.
Haddii aad haysato mashruuc cusub oo cabsi leh, laakiin aadan haysan ilo ama wada-hawlgalayaal ay taasi ku suurtagasho, qaab-dhismeedyadan ayaa u fiican inaad qof u muujiso waxaad rabto inaad sameyso, oo aad uga gudbiso. Yihiin 30 sheybaar oo ah qaababka PSD, AI iyo InDesign.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » TemplateShock, in kabadan 600 oo habeyn wax laga bedeli karo oo bilaash ah oo loogu talagalay xirfadleyda iyo shirkadaha
Cv Abuuraha craft-cv.com/generator/?l=fr
Ku jawaab kate
Waad salaaman tihiin, maaddooyinku iima oggola inaan ku soo dejisto iyaga oo leh google +, waxba kama helayo bogga maxaa yeelay taasi way dhici kartaa
Ku jawaab Andres Rivera
WIX waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud ugu sameysato degelkaaga gebi ahaanba waa bilaash